Airbnb.org - Mayelana
Umgomo wethu uwukuthola indlela yokwabelana ngendawo yokuhlala, izidingo zokuphila, nosizo uma ludingeka.
Iminyaka engaphezu kwengu-8, i-Airbnb isize abantu ngezikhathi zobunzima ngohlelo oluthi Izindlu Zezinhlekelele. I-Airbnb.org iyisahluko esilandelayo. Siyinhlangano engenzi nzuzo eyi-501(c)(3) enomgomo wethu kanye nebhodi labaqondisi.
Indlela esiqalise ngayo.
Umqondo waqhamuka kumbungazi
I-New York City yahlaselwa yiSiphepho u-Sandy, esinye seziphepho ezinamandla kunazo zonke emlandweni. U-Shell, umbungazi we-Airbnb e-Brooklyn, wathintana ne-Airbnb wacela ukunikela ngendlu yakhe mahhala kubantu abangenazindawo zokuhlala. Iqembu le-Airbnb lasebenza amahora amaningi ukuze lisheshe liyenze itholakale kubantu abangenandawo yokuhlala, futhi ngokushesha ababungazi abangaphezu kuka-1,000 bavulela abantu abaswele amakhaya abo.
Umphumela weSiphepho u-Sandy: Ukuvula amakhaya ngesikhathi adingeka ngaso
I-Airbnb yenza kube lula ukuthi ababungazi abengeziwe bakwazi ukulekelela
I-Airbnb isungula Ithuluzi lokusabela enhlekeleleni elivumela ababungazi emhlabeni wonke banikele ngamakhaya abo mahhala uma kunezinhlekelele.
Ababungazi emhlabeni wonke bavulela izisebenzi ezisizayo amakhaya abo
I-Airbnb iyasiza ekuzamazameni komhlaba kwase-Nepal futhi ababungazi bamukela iqembu labo lokuqala lezisebenzi ezisizayo, nezisebenzi ezivela kwa-All Hands and Hearts.
I-Airbnb isebenza nezinhlangano ezingenzi nzuzo ukuze iqonde indlela engasiza ngayo
Kwakhiwa ubuhlobo ne-Federal Emergency Management Agency (FEMA) ukuze kusizwe ekusakazeni izinsiza zokulungela izimo eziphuthumayo kubabungazi nasezivakashini. E-Greece nase-Balkans, i-Airbnb iqala ukusebenza ne-Mercy Corps ne-International Rescue Committee ukuze inikeze izisebenzi ezisizayo ezichayeke kakhulu enkingeni yababaleki base-Syria.
I-Airbnb nayo iqala ukunikela ngezibonelelo zezindawo zokuhlala ezinhlanganweni ezingu-15+ ezidinga izindawo zokuhlala zamaklayenti noma izisebenzi zazo, okubandakanya i-Service Year Alliance, i-Make-a-Wish, ne-Summer Search.
Umphakathi wababungazi uyasabela ekudubuleni kwase-Pulse nightclub
Ngesicelo sikahulumeni, i-Airbnb, i-Uber, ne-JetBlue bahlangana ukuze banikeze izindawo zokuhlala, izindiza, nezokuthutha ezihamba phansi zemindeni efika ngendiza ize emingcwabeni noma ivakashele izihlobo zayo esibhedlela. Bekungokokuqala umphakathi wababungazi uzinikela ekubungazeni abantu abathintekile ekudutshulweni kweningi ngezibhamu.
I-White House isungule Ukuthathwa Kwesinyathelo Kokuhileleka Kwezinkampane Ezizimele okuqondene Nenkinga Yababaleki Emhlabeni Wonke. I-Airbnb iyaphendula. Omunye wabasunguli be-Airbnb u-Joe Gebbia ubengomunye wezikhulu ezingu-20 ebezimenywe nguMongameli u-Obama ukuze kwenziwe izibophezelo enkingeni yababaleki.
I-Airbnb ibambisene ne-Make-a-Wish ngomgomo wokunika umndeni owodwa ngosuku indawo yokuhlala ngo-2017.
I-Airbnb yenza isibophezelo ku-International Rescue Committee
Isabela emyalweni wokumisa konke ukungena kwababaleki nokuvala okwesikhashana abantu abavela emazweni ayisikhombisa agcwele amaSulumane, i-Airbnb izibophezela ekunikezeni izindawo zokuhlala kulabo abathintwe yilokhu kuvinjelwa. I-Airbnb ithi izonikela ngo-$4 million phakathi neminyaka engu-4 ku-International Rescue Committee ukuze isekele izidingo zezindawo zokuhlala zabantu abangenamakhaya.
U-Susan no-Mousa e-Denver
I-Airbnb ivula ngokusemthethweni Izindlu Zezinhlekelele
NgoSuku Lwababaleki Lomhlaba Wonke, i-Airbnb imemezela ukuthi izoyiphinda kabili imizamo yayo yokunika izindawo zokuhlala ngeZindlu Zezinhlekelele. Uhlelo lusize umphakathi wababungazi ukuba unikele ngezindlu mahhala kubantu abathintwe izinhlekelele noma ababalekela impi.
Umphakathi usiza abantu abangaphezu kuka-20,000 namuhla
Umphakathi weZindlu Zezinhlekelele usabela ezinhlekeleleni ezingu-4 izikhathi zilandelana. ISiphepho u-Harvey siba isiqalo esikhulu somphakathi wababungazi. Ngenyanga nje eyodwa, ababungazi basiza abantu abangaphezu kuka-2,000 abalahlekelwa izindlu ezifundazweni ezingu-3. Ngesikhathi esifanayo, ababungazi bavula amakhaya abo kulabo abathintwe yiSiphepho u-Irma, iSiphepho u-Maria, nokuzamazama komhlaba e-Mexico City.
I-Airbnb imemezela uhlelo lwezindawo zokuhlala izivakashi ezigulayo
Ku-Biden Cancer Summit, i-Airbnb imemezela uhlelo lwezindawo zokuhlala zezokwelapha olubambisene ne-Hospitality Homes, i-Fisher House, ne-Make-A-Wish. Ngalolu hlelo, umphakathi weZindlu Zezinhlekelele ungahlinzeka ngezindawo zokuhlala zamahhala kulabo abahamba amabanga amade ukuze bathole ukwelashwa.
Uhambo lwamamayela angu-800 ukuze welashwe
Ababungazi basabela emililweni yequbula emibili ehlukene e-California
Ngemva kweMililo yase-Camp neyase-Woolsey e-California, ababungazi abangaphezu kuka-2,500 bavula amakhaya abo, futhi abantu abangaphezu kuka-2,300 bathola indawo yokuhlala.
I-Airbnb yakha indlela yababungazi yokuba banikele ukuze basekele iZindlu Zezinhlekelele
Ababungazi babefuna izindlela ezengeziwe zokubamba iqhaza eZindlini Zezinhlekelele. Ngenxa yalokho, i-Airbnb imemezela inkundla yeminikelo evumela ababungazi banikele ingxenye yomholo wabo kophathina abangenzi inzuzo beZindlu Zezinhlekelele ukuze kukhokhelwe izindawo zokuhlala zalabo abazidingayo.
Ababungazi banikela ngezindawo zokuhlala kubantu abangaphezu kuka-1,000 abathintwe imililo yequbula yase-Australia e-New South Wales nase-Victoria. Lokhu kuphawula ukuvulwa kweZindlu Zezinhlekelele emhlabeni wonke eziningi kunazo zonke kuze kube namuhla.
Umphakathi wababungazi usabela kubhubhane lwe-COVID-19
I-Airbnb imemezela indlela yababungazi yokunika izisebenzi zezempilo izindawo zokuhlala nabosizo lokuqala ababhekene ngeziqu zamehlo nobhubhane.
I-Airbnb ikhulisa inkundla yayo yokunikela, ngakho noma ubani angenza umnikelo ezinhlanganweni ezingenzi inzuzo ezisiza izisebenzi ezichayeke kakhulu ukuba zithole indawo yokuhlala.
I-Airbnb imemezela i-Airbnb.org
I-Airbnb isungula i-Airbnb.org, futhi ijabulela wonke umsebenzi omuhle owenziwe ababungazi nophathina ngeZindlu Zezinhlekelele. Njengenhlangano engenzi inzuzo ezimele, i-Airbnb.org izogxila ekusizeni abantu babelane ngezindlu nezinsiza ezikhathini ezinzima.
Nansi ibhodi yethu.
‘I-Airbnb iwabonisile amandla okuxhumana kwabantu nokwamukela abantu ongabazi. I-Airbnb.org inomgomo wokusebenzisa lawo mandla ekushintsheni ukuphila nokuguqula umhlaba wethu. Kuyilungelo ukuba ingxenye yalolo shintsho.’
‘Kungihlaba umxhwele lokho okwaqala ngomyalezo ovela kumbungazi, futhi kwaba inhlangano yabantu abangu-100,000 abavulela umphakathi wabo amakhaya abo. Kulezi zikhathi ezibucayi, lo msebenzi ubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili.’
‘Indawo yokuhlala ingesinye sezidingo eziyisisekelo kunazo zonke futhi ngohlelo lwabo iqembu le-Airbnb.org linikela ngezindawo zokuhlala ngezikhathi ezidingeka kakhulu ngazo.’
‘Ukunikela ngezindawo zokuhlala lapho abantu becindezelekile kungesinye sezenzo ezibonisa ubuntu nozwela umuntu angazenza. Kuyangijabulisa ukuba yingxenye yalo msebenzi obaluleke kangaka noshintsha ukuphila.’
‘Kwangijabulisa ukujoyina iBhodi le-Airbnb.org ngenxa yegalelo elikhulu engikholelwa ukuthi singaba nalo ngokunikeza abantu izindawo zokuhlala nezinsiza kulabo abazidingayo.’
Ukubambisana nezinhlangano ezingenzi inzuzo
I-Airbnb.org inikeza izibonelelo ezinhlanganweni ezingenzi inzuzo ezixhumanisa abantu nezindlu zesikhashana, izinsiza, nosizo olukhethekile ngezikhathi zenhlekelele. Sinikeza nezindlu zamahhala nezinezaphulelo ezivela emphakathini wababungazi be-Airbnb.
Ukutshala imali yezinto esingabanikazi bazo
Sikholelwa ekusebenziseni amandla nezinsiza zethu ekunikeleni emhlabeni onobulungisa. I-Airbnb.org ithembele ezinhlanganweni ezinezixazululo nezinhlelo ezihambisana nokuzibophezela kwethu kokuthuthukisa ukuphathwa kahle kwabantu emphakathini.
Ukuqonda igalelo lethu
Sinomgomo wokukala igalelo lezimali zethu nohlelo lwezindlu ukuze sithuthukise inhlalakahle ngokuqondene nokusebenzelana kwengqondo nomphakathi, ukunciphisa umthwalo wezezimali, nokuqinisa umphakathi nokukhululeka kwezivakashi.
I-Airbnb.org ayizamukeli izicelo zezimali okwamanje. Ngo-2021, sizothumela imininingwane mayelana nomjikelezo wethu wesibonelelo ozayo ngokuqondile ezinhlanganweni ezingenzi inzuzo ezifanelekayo.
Indlela esisebenzelana ngayo ne-Airbnb, Inc.
I-Airbnb.org iyinhlangano engenzi inzuzo ezimele nesekelwa umphakathi ye-501(c)(3). I-Airbnb.org inegalelo ebuchwephesheni, amasevisi nezinye izinsiza ze-Airbnb, Inc. ngaphandle kwezindleko ukuze kufezwe injongo yokusiza ye-Airbnb.org. I-Airbnb.org iyinkampane ehlukile ezimele ye-Airbnb, Inc. I-Airbnb, Inc. ayikhokhisi izindleko zesevisi yezindawo zokuhlala ezisekelwayo ze-Airbnb.org enkundleni yayo.
Uhlelo Lwezindlu Zezinhlekelele lusungulwe yi-Airbnb, futhi luncike emoyeni wokupha wababungazi be-Airbnb, njengendlela yokusiza abantu abaswele bathole izindawo zokuhlala zesikhashana. Uhlelo Lwezindlu Zezinhlekelele okwamanje lushintshelwa ku-Airbnb.org, futhi i-Airbnb.org izokwakhelwa emizamweni yohlelo, ehambisana nenjongo nomgomo ongaguquki we-Airbnb.org wokusiza.